Home News Qaranimadda iyo Dowladnimada Soomaaliya marka kale ma eersan doontaa beesha Mareexaan? Falaqayn...
Qaranimadda iyo Dowladnimada Soomaaliya marka kale ma eersan doontaa beesha Mareexaan? Falaqayn iyo talo soo jeedin
Madaxweyne Siyaad Barre ayaa sabab u ahaa burburkii ku yimid qaranimada iyo dowladnimada Soomaaliya. In ka badan 20 sano ayaa shacabka Soomaaliyeed si qalbi furan u soo dhaweeyeen Madaxweyne Maxamed Siyad Barre iyo xukunkiisiiba. Wanaag badan oo uu qabtay waa jirtaa laakiin wanaag kastaa uu qabtay wuxuu ku soo dhaamaday burburka qaranimadda Soomaaliya. Sanadadii ugu danbeeyay xukunkiisa waxa uu si ku talagal ah go’aan ku gaaray in uu burburiyo qaranimada Soomaaliya. Sida aan la wada soconana dowladnimadii Soomaaliya waxaa ay la dhimatay Maxamed Siyaad Barre. Cadaawadii uu abuuray iyo ku tagrifalkii awooda dowladnimada oo ay qayb wayn ku lahayeen beesha Mareexaan ee uu ka dhashay Siyad Barre ayaana keentay in dagaal ahli la galo kaas oo sabab u noqday in dowladnimadii Soomaaliya lunto.
Sodonkii sano ee ugu danbeeyay Soomaaliya waxaa ay gashay dagaal ahli ah kaas oo dhiig badan oo Soomali ah ku daatay, hanti badan oo Soomali ah ku baaba’day, dhibtadii laga dhaxlayna waxaa ay taabatay qod kastaa oo ah . Dalku waxa uu soo maray maraxalado kala duwan oo aad u xanuun badan iyo da’daalo dib logu raadinayo dowladnimadii Soomaaliya. Waxaa lagu guulaystay in dib loo soo celiyo dowladnimadii Soomaaliya, haba ahaato mid tabar yar. Madaxdii isaga danbeeysay dalka hogaankiisa gaar ahaan afartii dowladood ee ugu danbeeysay waxaa ay guulaysteen in si tartiib tartiib ah dib loogu soo celiyo dowladnimadii Soomaaliya. Waxaa dhacay doorashooyin si xur ah xukunka lagula kala wareegay, waxaana shacabk Soomaaliyeed dareemeen neecaaw dowladnimo. Sidoo kale waxaa uu ilaah waafajiyay shacabka Soomaaliyeed in cadaawadii qabiil ee ka dhalaty dagaalkii Sokeeye la iska ilaabo, Soomaaliyana baal cusub oo nabadeed furmo.
Doorasahdii Madaxweyne Farmaajo
Hadaba sanadkii 2017 waxaa la doortay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo, oo ay isku beel, gaar ahaan isku jufo ka soo wada jeedaan Madaxweynihii hore Maxamed Siyad Barre. MW Farmaajo waxa uu magaalada Muqadishu yimid isaga oo boorso kaliya wato. Mudo ka badan 30 sanana caruurtiisa ayuu kula noolaa dal nabad ah waana uu ka badbaaday dhibkii dalka ku habsaday. Dhanka kale gacan kama uusan gaysan dib u soo noolayntii dowladnimdda Soomaaliya. Nasiib wanaag sadax bilood dib waxaa loo doortay in uu noqdo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa lagu wareejiyay haykalkii dowladnimo ee dib loo soo alkumay inta uu dalka ka maqanaa.
MW Farmaajo waxaa uu degay xartunta Villa Soomaaliya oo calanka Soomaaliya ka lulunaya. Waxa ay taas astaan u ahayd in dib loo soo celiyay sharafkii umadda Soomaaliyeed. Maalintii la caleema saarayay MW Farmaajo waxaa caleemasaarkiisa ka soo qayb galay madaxwaynayaal ka kala socda wadamada dariska la ah Soomaaliya taas oo cadayn u ahayd in Soomaliya dib u soo ceshatay dowladnimadeeda.
Hal sano iyo bar uu xukunka dalka hayay MW Farmaajo waxaa muqato in ay faraha ka sii baxayso dowladnimada Soomaaliya. Waxaaa burbur ku yimid hay’adihii laf-dhabarka u ahaa dowladnimada Soomaaliya sida Hay’adda Nabad Sugida Qaranka, Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed iyo wasaradihii tabagalin lahaa qorshaha xukuumadda. Horaantii sandakaan ayaa ay ahayd markii dowladda Marayanka ay ku eedesay dowadda Soomaaliya in ay si dadban u burburisay awoodda Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed taas oo keentay in ay dhaqaalihii lagu taageerayay ciidanka laga joojiyo.
Qaladkii ugu waynaa ee uu MW Farmaajo shacabka ka galay waxa ay ahayd magacaabista nin ay ehel yihiin, oo seedi u ah, Ra’isal Wasaare Xassan Cali Kheyre. Arintaan waxay durbadiiba keentay in MW Farmaajo luumiyo kalsoonidii shacabka Soomaliyeed oo aaminsanaa in ay ka soo gudbeen is qabiilaysi. Dhibaatooyinka badan ee hadda ka jiraa dalka waxaa inteeda badan loo eedeyn karaa RW Kheyre hadana mas’uuliyadeeda waxaa iska leh Madaxweyne Farmaajo. Waxaa shacabka Soomaaliyeed wali la yaaban yihiin sida uu Farmaajo ugu ciyaaray kalsoonidoodii iyo qalbiga wanaagsan ay u muujiyeen Shacabka markii la doo doortay.
Nasiib xumo waxaa soo muuqnayo ifafalhii iyo daruufihii keenay in lala dagaalo xukunkii Maxamed Siyad Barre. Waxaa faraha ka baxay amnigii dalka, xiriirkii dowlad goboleedyada waa lumay, waxaa socda musuq-maasuq aan horay loo arag oo lagu dhacayo hantidii qaranka, hogaankii dalka waxa uu gacanta u galay koox dahsoon oo aan la dooran MW Farmaajo ka amar qaato, Beesha caalamka waxa ay bilaawday in ay dib uga gurato taageeridda dowladda Soomaaliya. Waxaa hay’adihii dowladda ugu sareeyay mas’uul looga dhigay dhalinyaro qabiil lagu keenay, waxaa lacag xad dhaaf ah lagu bixiyaa soo dajinta iyo soo dhawayta kooxo ehel la ah RW Kheyre ama MW Farmaajo, waxaa laga fogaanayaa qof kastaa ee wax bartay ama aqoon lagu tuhmayo, safiiradii Soomaliya waxaa loo magacaabay shaqsiyaad lagu soo xulay qabiil oo aan ka tarjumaynin danaha umadda Soomaaliya.
Sida aad ku aragtaan qoraalka kor ku qoran waxaa soo muuqanaya dhamaan astaamihii keenay in shacabku la dagaalamaan xukunkii Maxamed Siyad Barre.
Astaamaha ay wadagaan MW Farmaajo iyo Maxamed S. Barre
Maxamed S. Barre Maxamed C. Farmaajo
Dhamaan hay’adihii amniga waxaa gacanta loo galiyay beesha Mareexaan iyo beelaha ehelka la ahaa MW M S. Barre (Morgan, C/rahman Jama barre etc.. )
Hogaankii dalka waxa u u gacan galiyay seedigiis, ciidankii iyo hay’adihii amnigana waxaa la hoos keenay beesha Mareexaan( RW Kheyre, Caanood, Kulane Shoole, Balal, Fahad, Xaaska MW Zeynab Macalin etc..)
Musuq baahay iyo iibinta hantida qaranka (hestii saaco cali (AUN) ayaa tusale nooga filan Waxaa hay’adhii dhaqaalaha gacanta loo galiyay kooxo hoos timaado Farmaajo iyo Seedigiis. Waxaana socda boob lagu hayo hantida qaranka
Hay’adii NISA oo uu Maxmed Siyaad Barre u istcmaalay in lagu ugaarsado siyaasiinta iyo kooxa loo arko in ay cadow kuyihiin dowladda NISA oo burburtay, hogaankii oo ka lumay iyo iyada oo noqtay xarun lagu ugaarsado qof kastaa oo ka aragti duwan hogaanka dowladda. (istcmaalka Sadaq John, siyaasiyiin la xir-xiray iyo qaar la dilay)
Waxaa burburay /moralkana ka dhintay ciidanka xooga dalka.. bixinta darajada ciidanka waxa ay noqoaty mid qabiilaysay, markii ciidanka dhintay ayaana qaranimadii dhimatay, hoganka ciidanka waxa uu u dhiibtay saraakiil Mariixaan ah.. Ciidanka Xogga dalka oo burbur ku yimid, niyad jab balaaran iyo saraakiil aan ka amar qaadan ciidanka. MW Farmaajo waxa uu hogaanka ciidanka hoos keenay saraakiil Mariixaan ah Tusaale Janaraal Caanood oo laga dhigay abaanduulaha ciidanka xooga dalka, laakiin u dhaqmo in uu yahay Wasiirka Wasaaradda
Musuq-masuq baahay, hatidii qaranka oo loo istcimaaay in ay tahay mid qoys ma reexaan leeyahay.
Hantida Qaranka oo si aan xishood lahayd loo boobayo. Shirkado shisheeye oo loo saxiixayo heshiisyo, mashaariic been abuur oo la bixiyay, tusaale lacagta lagu dhaco cuno siinta ciidanka, mashaariicda lagu naasnuujiyo ganacsastada Murusade)
Baaburtii dowladda oo lagu wareejiyay beesha Mareexaan Hantida dowladda oo gacanta loo galiyay kooxo ay isku beel yihiin RW Kheyre iyo marwada madaxweynaha.
Iska horgeynta beelaha Soomaaliyeed si dagaal sokeeye u yimaado Sameeynta ciidanka beeleedka xasilinta iyo istcimaalka awooda dowladeed oo lagu gumaadayo beelaha qaarkood.
Beesha caalamka oo si qorshasaysan u joojisay kaalamada Soomaliya, taas oo soo dadajisay burburka Xukunkii Maxamed Siyaad Barre Beesha caalamka oo bilaawday dib u gurasho iyo iyada oo la kordhiyay taageerada dowlad goboleedyadda si loo dhimo awooda dowlada dhexe
Dalacsiinta shaqsiyaad iyo kooxo aan aqoon u lahayd dowladnimdda Magaacista wasiiro lagu soo xulay laciifnimo iyo waayag aragnimo la’aan tusaale Gud Maxkamada Sare, golaha wasiiiradda hadda jira
Abuuritaanka kooxo dacaayad u sameeya dowladda, fanaaniin loogu talagalay in shacabka lagu jahawareeriyo Waxaa dhaqaalo fara badan lagu bixayaa abaabulka dacaayadaha Facebook, twitter iyo warbaahinta sida Amin Caamir
Hanjabaad, xirida iyo dilal qorsheeysay oo ku wajan dadka loo arko in ay ka soo horjeedaan dowladda. Weeraro lagu qaaday siyaasiyiin , qaar la xiray, kuwa guryahooda lagu weeraray iyo qaar dalka laga masaafuriyay, CC Shakur, cabdi Qaydiid iyo kuwo kale
Amusnaanta Beesha Mareexaan iyo Midnimadda Soomaaliya
Waxaa wax aad looga xumaado ah, shaki badana galiyay shacabka Soomaaliyed aamusnaanta ay aamusan yihiin beesha uu ka dhashay MW Farmaajo. Dad badan oo ka tirsan beesha Mareexaan oo aan kala hadalnay aamusnanata beesha waxa ay ku doodeen“ anaga ninkaa nagama tirsano, mana na masalo”. Hadii beesha Mareexaan ayan la qabin qaladka laga galayo magacooda waa in ay ka hadlaan hoganka MW Farmaajo muujiyaana dareenkooda. Waxa ay ugu muuqataa shacabka Soomaaliyeed in beeshu qayb ka tahay hogaanka MW Farmaajo, sidii ay uga mid ahaayeen tii Maxamed Siyaad Barre kuna faraxsan yihiin diban-daabyada loo gaysanayo qaranimada Soomaaliyeed.
Waxaa tusaale nooga filan xukunkii Maxamed Siyad barre, shantii sano ee ugu danbeeysay xukunkiisa ma jirin qof Mareexaan ah oo ka hor yimid talaabooyinkii guracanaa ee Maxamed Siyad qaaday kula kacay qaranimda Soomaaliya. Waxaa muuqanaysay in Beeshu garab ku siinaysay dulmiga Maxamed Siyad Barre. Nasiib xumo hadaba waxaa shacabka Soomaaliyeed u muuqata beeshu in ay raali ku tahay dulmiga MW Farmaajo.
Shacabka Soomaaliyeed, Beesha Mareexaan ayaa ay u haysan doonan godobta Farmaajo ka galo dowladnimadda Soomaaliya. Su’aashu shacabka Soomaaliyeed iswaydinayaan waxa ay tahay Qaranimadda iyo dowladnimada Soomaaliya marka kale ma eersan doontaa beesha Mareexaan?
Halkaan ka daalaco isbar-bardhiga labada Madaxweyne
Previous articleCulimada Soomaaliyeed Oo Ka hadlay Dayaxmadoobaadi Xalay ka dhacay Caalamka
Next articleAxmed Madoobe Oo Eedeyn Kululu Ujeediyay Dowlada Soomaaliya
Wasiir Cawad ”Unhcr Waxaan Kala Hadlay Dib Usoo Celinta Soomaalida Ku...
Al-shabaab oo Kenya kusii Xoogeeysaneeysa iyo Caruur yar yar oo ay...